विबाहकै दिन बेहुली छतबाट खसेर मेरुदण्ड नै भाँचियो, बेहुली लिन आएका बेहुलाले अस्पतालकै बेडमा नै सिन्दर भरे ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारविबाहकै दिन बेहुली छतबाट खसेर मेरुदण्ड नै भाँचियो, बेहुली लिन आएका बेहुलाले अस्पतालकै बेडमा नै सिन्दर भरे !
विबाहकै दिन बेहुली छतबाट खसेर मेरुदण्ड नै भाँचियो, बेहुली लिन आएका बेहुलाले अस्पतालकै बेडमा नै सिन्दर भरे !
December 17, 2020 admin समाचार 2399
एजेन्सी । बेहुली आरती अस्पतालको खाटमा सुतिरहेकी छिन् । नको हातमा मेहंदी लगाईएको छ । उनको छेउमा बसिरहेको युवक उनका पति अवधेश हुन् । जो उनकी पत्नीको रेखदेखमा छन्।
वास्तवमा, प्रतापगढको कुंडा क्षेत्रमा बस्ने आरतीको लागि विवाहको तयारी पूरा भएको थियो र जन्ती आउँदै थिए । तर दिउँसो उनी आफ्नो तीन बर्षे भतिजालाई छतमा खेल्ने क्रममा बचाउन छतबाट खसिन् । दुर्घटनामा उसको मेरुदण्ड भाँचिएको थियो र दुवै खुट्टामा पनि समस्या छ । घरका साथीहरूले उनलाई प्रयागराजको निजी अस्पतालमा भर्ना गरे।
नेपाली सेनाका अधिकृत २१ वर्षीय पिटर थापाले बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पाए !
December 23, 2020 admin समाचार 1447
संसारको लागी एक उदाहरणीय बनेको नेपाली सेना लाई संसारकै बाहादुरी सेनाको रुपाम चिनिन्छ । विशेषगरि गोर्खा सेनाको नामले संसारमाझ परिचित नेपाली सेना सँच्चिकै बाहादुरी छ्न । आफ्नो पुर्खाको वीरतापुर्ण इतिहासलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेको गोर्खाली
January 5, 2021 admin समाचार 2450
December 16, 2020 admin समाचार 2456